Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka Mombamomba ny Wiktionary Fampitandremana Développeurs Affichage mobile
Ny firafitry ny firaketana tokana, ny wiki dia nanampy betsaka ny fahombiazan'ny sehatry ny fanabeazana any amin'ny firenena maro. Ny Wikis dia manome mpampianatra sy mpianatra ho afaka hanamboatra, miditra ary mizara fampahalalana iombonana momba ny fianarana. Ny fizarana tsirairay dia nampidirina tao anaty wiki iray izay natsangana haingana ary novaina araka ny karazam-piofanana azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fanabeazana.
Max Bell, manam-pahaizana Semalt , manazava fa ny wiki anjara asa manan-danja amin'ny fanatsarana ny fifandraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Ireo manam-pahaizana dia manohana ny fampiasana wiki wiki ao an-tsekoly rehefa manampy azy amin'ny fandaminana ny fandaharam-pianarana. Ireto ny hetsika karazan'olona iray nataon'i wiki:
Mizara sy manome fametraham-panontaniana matetika (FAQ), ary fanangonana vaovao
Fizarana torolalana sy torolalana amin'ny fanombohan'ny fampianarana
Fanomezana sy fandinihana ireo torolàlana momba ny fametrahana ny rindrambaiko ilaina
Manangona soso-kevitra hanatsarana ny antsipiriany momba ny fianarana
Ny fanao amin'ny fanangonana, fizarana ary famoahana lahatsoratra amin'ny wiki dia manampy amin'ny fanangonana ny fampahalalana ao amin'ny tahiry. Ny tatitra voarakitra dia loharanon'ny fahalalan'olombelona ho an'ireo mpikambana sy mpianatra hafa. Ny fampiharana ny fizarana sy fanadihadiana ny FAQ dia manatsara ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana ny tetikasa ho avy.
Ny fiheverana ny fomba hitantanana ny Wiki-Wiki
Mitantana ny fanoloran-tena tanteraka sy ny fanoloran-tena ny fitantanana ny lalanao wiki. Ireto misy toro-hevitra momba ny fomba hifehezana ny wiki anao:
Manondro sy mamaritra ny andraikitra samihafa atolotry ny olona samihafa. Ohatra, raha ny fanesorana ny lahatsoratra wiki, avelao izany ho andraikitry ny mpiasa fa tsy mpianatra..
Lazao ireo faritra izay mitaky ny fiaraha-miasa amin'ny mpianatra mba hisorohana ny fisafotofotoana. Tokony homen'ny mpianatra anjara amin'ny fanovana sy famoronana lahatsoratra wiki
Mahaiza mandanjalanja momba ny tanjon'ny tapany amin'ny wiki. Raha toa ny sasantsasany amin'ny ampahan-dresaka wiki-nao natao hampielezana ny angona sy ny fampahalalam-baovao, hametra ny mpianatrao tsy hiditra amin'ireo singa.
Ny talen'ny kilasy dia manatanteraka asa sy andraikitra samihafa amin'ny wiki wiki. Ireto ny fomba fiasa mahazatra ataon'ny mpitsabo amin'ny fitantanana wiki:
Fanarenana sy famonjena WikiWiki
Rehefa mihazona ny lisitry ny wiki anao, dia aza misoratsoritra lahatsoratra iray izay azo ampiasaina amin'ny fehintsoratra ho avy. Rehefa nesorina ny lahatsoratra, mbola misy rohy hita maso izay mbola nisy namorona azy. Raha te hamerina lahatsoratra Wiki ianao dia tsindrio ny bokotra 'Restore' eo amin'ny screen.
Afaka mamafa lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fanovana ny lahatsoratra ny solosaina wiki. Raha hamafa lahatsoratra iray avy amin'ny lalao wiki ianao, andramo ny lahatsoratra mba ho voafafa ary tsindrio ny bokotra 'Manova'. Horonan-tsary ary tsindrio ny 'Delete Article' ary fidio 'Yes' mba hanamafisana ny fanafoanana lahatsoratra.
Fijerena ny fidirana amin'ny lisitry Wiki
Ny mpampiasa dia afaka mifehy ny fidirana amin'ny wiki iray amin'ny alàlan'ny fanoratana ny fametahana alalana amin'ny lahatsoratra na amin'ny famatorana ireo lahatsoratra misy. Mba hifehezana ny fidirana, sokafy amin'ny 'Settings' ary tsindrio ny 'Advanced Settings.' Hanova ny fidirana amin'ny lalao wiki amin'ny alàlan'ny famelàna ny ekipam-bahoaka hidirana amin'ny wiki
Mamafy sy manakatona lahatsoratra Wiki
Mba hahazoana valiny marina ao amin'ny Wiki-Wiki, mamorona lahatsoratra vitsivitsy hanehoana ny drafitra momba ny fandaharam-pianarana. Manomeza rohy mankany amin'ny sasantsasany sy ny FAQ momba ny fizarana tsirairay ho rakotra Source .